Kitapo fatoriana mamania miloko an-kalamanjana azo ampiasaina amin'ny saha OEM
Izahay dia orinasa manana traikefa mihoatra ny 20 taona amin'ny famokarana sy famokarana vokatra midina. Raha te hihaona amin'ireo seho fampiasana samihafa eo amin'ny sehatry ny matihanina dia nanatsara ihany koa ny asa-tanana nentim-paharazana. Ity vokatra ity dia misy karazany manokana sy famolavolana tsy manam-paharoa azo isafidianana hahitana izay ilainao amin'ny sehatra samihafa, ny lamba ivelany amin'ity kitapo fatoriana ity dia vita amin'ny fitsaboana 20D380T nylon DWR, izay afaka misoroka tsara ny fanoherana ny rano, manatsara ny fanoherana ny loto ary manamora fanadiovana sy fikarakarana isan'andro. Ny lamba anatiny dia mampiasa lamba vita amin'ny volon-dronono vita amin'ny 20D 380T, manana fofonaina tsara sy endrika milay amin'ny hoditra, mahatonga ny mpampiasa hahazo aina kokoa.
Kitapom-basy vita amin'ny camouflage tsy azo tanterahina rip-stop kitapo fatoriana miaramila ho an'ny toetrandro mangatsiaka be
Efa nifoha ve ianao nandritra ny alina mangatsiaka? Rehefa mandry ao anaty kitapo fatoriana ao anaty laininao ianao, mangovitra sy mangovitra, tsy mahita torimaso mora noho ny hatsiaka, mihaino ny rivotra mangatsiaka, orana sy lanezy any ivelany, manantena ny hanana kitapo fatoriana toy izany ahafahanao mankafy ny fatorianao mafana amin'ny toetrandro mangatsiaka be? Ankehitriny, tonga ny fotoana avelao hanao ny safidinao, mendrika an'ity fitaovana ity ianao.
Mpanamboatra 2020 ambony 90% nidina feno kitapo fatoriana miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana
Raha mbola manahy momba izay hisafidianana kitapo fatoriana ho an'ny any ivelany ianao dia io no safidinao tsara indrindra. Namboarinay manokana ny lanjan'ny famenoana samihafa mba hahatratrarana ny fepetra takin'ny olona samihafa amin'ny mizana mari-pana. Na vonona ny handeha hitoby ianao, hiakatra an-tendrombohitra, hianihana, bisikileta, hanjono, na handeha na inona na inona.
Fampakaram-bokatra amin'ny ririnina ho an'ny olon-dehibe any an-tokotany 2020
Ity kitapo fatoriana ity dia vita amin'ny lamba 20N 400T tsy mahazaka rivotra, tsy mahazaka rano ary mahatohitra ranomaso lamba, izay ahazoana aina, milay amin'ny hoditra ary sariaka amin'ny tontolo iainana. Izy io dia afaka miaro ny hafanana amin'ny fomba mahomby, mampihena ny fanaparitahana hafanana, manakana ny rivotra mangatsiaka tsy hiditra, ary manana fahaiza-manao bakteria sasany, mahatonga azy io ho hadio sy ho salama kokoa hampiasaina isan'andro.
Fivarotana mafana famonoana rano tena tsara kitapo fatoriany tsy misy rivotra ho an'ny mpihaza tafika
Ireto kitapo fatoriana camouflage nomerika ireto dia natao manokana ho an'ny tafika, mpikarokaroka, mpihaza ary ireo izay mpankafy miaramila. Misy karazana loko isan-karazany amin'ny safidy, izay mety amin'ny endriny maro isan-karazany, toy ny ala, ala, tendrombohitra sns. Ireo dia vita amin'ny lamba 20lon 380T Nylon, izay tsy misy rivotra, mandroaka rano, mitsahatra, mafana be ary zava-bita tsara hafa.
Kitapo fatoriana valopy tokana splicable miloko misy satroka OEM azo esorina
Kitapo fatoriana valopy misy karazana loko sy fiasa manokana. Malaza be izy io any amin'ny firenena maro satria tsy io kitapo fatoriana io ihany no azo ampiasaina rehefa mivoaka mitoby, fa ao an-trano ihany koa. Ny lamba ivelany amin'ity kitapo fatoriana ity dia vita amin'ny lamba nilona 20D 320T na 20D 380T. Ny lamba tsirairay dia notsaboina manokana, izay mety handrava ny fanoherana sy ny fanoherana ny rano. Manana fanoherana mahery vaika izy io, mahatonga ny vokatra maharitra sy mora diovina. Ny lamba anatiny amin'ity kitapo fatoriana ity dia lamba nilona 20D 320T na 20D 380T ihany koa.
2021 loko mamirapiratra malaza midina feno kitapo fatoriany
Ny kitapo fatoriam-pianakaviana mahazatra dia maodely iray izay malaza indrindra amin'ny matihanina. Nandritra ny dingam-pamokarana, nohavaozinay ny asa-tanana nentim-paharazana mba hanatsarana ny hafanana sy ny fampiononana. Mandritra izany fotoana izany dia jereo ireo loko malaza amin'izao fotoana izao mba hahatonga anao ho tia mitoby sy fitsangatsangana. Misy safidy lamaody kokoa. Ny lamba ivelany amin'ity kitapo fatoriana ity dia lamba 20D 320T Nylon, miaraka amin'ny fitsaboana anti-drilling sy ny famoahana rano, izay mahatonga azy io ho mateza kokoa sy mahatohitra ny loto ary mora diovina kokoa. Ny lamba manarona dia vita amin'ny lamba 320T pongee afaka miaina sy mahatohitra volory mba hanamafisana ny fampiononan'ny mpampiasa. Ny atiny dia feno 800g 80% gana ary ny lanjany dia manodidina ny 1050g.
Kitapo fatoriana valopy tsy ara-dalàna manaingoana loko roa no fenoina amin'ny ririnina
Kitapo fatoriana malaza be ity miaraka amina endrika famolavolana stitching miloko roa, lamaody ary malaza amin'ny sehatra e-varotra isan-karazany. Tsy vitan'ny hoe manana endrika famolavolana kanto fotsiny izy io, fa mitandrina tsara koa amin'ny famokarana. Ny sosona ivelany dia vita amin'ny lamba Nylon 20D 380T misy fitsaboana manokana. Izy io dia manana ny fiasan'ny fanoherana ny rano sy ny fanoherana ny rano, izay mety amin'ny fitehirizana sy ny fanadiovana isan'andro. Ny lamba anatiny dia mampiasa fibre polyester 20D 380T, izay manana fidiovan-drivotra tsara, tena malefaka sy mahazo aina raha mikasika azy. Ny famenoana anatiny dia 90% gana ary ny lanjan'ny famenoana 800g.
Kitapo fatoriana azo zahana valopy tokana misy loko miloko amin'ny lohataona sy fararano
Ity kitapo fatoriana ity dia nohatsaraina amin'ny alàlan'ny kitapo fatoriana valopy mahazatra, izay tena mety amin'ny fianakaviana izay te mitoby amin'ny lohataona sy fararano. Ny sosona ivelany amin'ity kitapo fatoriana ity dia vita amin'ny lamba Nylon 20D 380T mahazaka ranomaso, ary notsaboina tamin'ny famoahana rano, izay mahatohitra kokoa ny loto ary mora diovina kokoa mandritra ny fampiasana azy; ny lamba anatiny dia vita amin'ny fibre polyester 20D 380T, izay malefaka kokoa sy malefaka kokoa raha mifandray.